Diyaaradaha Ruushka ayaa fasaxay inay bilaabaan duulimaadyo ay ku tagayaan meelaha loo dalxiis tago ee Badda Cas ee Sharm El Sheikh iyo Hurghada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Diyaaradaha Ruushka ayaa fasaxay inay bilaabaan duulimaadyo ay ku tagayaan meelaha loo dalxiis tago ee Badda Cas ee Sharm El Sheikh iyo Hurghada
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Masar • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Aeroflot iyo S7 airlines ayaa duulimaadyo ka bilaabi doona Moscow, Rossiya, oo horey ugu duuli jirtay Masar, waxay kordhin doontaa inta jeer ee duulimaadyada. Ural Airlines, Azur air, Nordwind, Ikar, Red Wings, S7, iyo Yamal ayaa duulimaadyo ka bilaabi doona gobolka.
Xeer ilaaliyaha duulista rayidka ee Ruushka ayaa oggolaaday 9 shirkadood oo duulimaadyo ah si ay u bilaabaan duulimaadyada dalxiiska ee Masar.
Duulimaadyada loo qorsheeyay Hurghada iyo Sharm El Sheik si loo bilaabo toddobaad ama laba toddobaad gudahood.
Duulimaadyadu waxay u baahan doonaan ugu yaraan toddobaad si ay u bilaabaan iibinta una sameeyaan shabakad duulimaadyo.
Wakaaladda Gaadiidka Cirka ee Federaalka ee Ruushka ayaa maanta ku dhawaaqday in 9 markab oo kuwa cirka ah oo Ruush ah loo oggolaan doono inay duulimaadyo joogto ah oo jadwal ah ka bilaabaan Ruushka kuna aaddan meelaha loo dalxiis tago ee Badda Cas ee Hurghada iyo Sharm El Sheikh.
“Diyaaradaha waxaa la siin doonaa xaqa inay ku shaqeeyaan hal duulimaad toddobaadkii waddo kasta oo tagta Hurghada iyo Sharm EL Sheikh. Sidoo kale waddooyinka Moscow - Hurghada iyo Moscow - Sharm El Sheikh, tirada duullimaadyadu waxay kordhaan 5 illaa 15 duulimaad toddobaadkiiba, ”ayuu yiri xeer -ilaaliyaha duulista rayidka ee Ruushka.
Aeroflot iyo S7 airlines ayaa duulimaadyo ka bilaabi doona Moscow, Rossiya, oo durba u duulaysa Masar, waxay kordhin doontaa inta jeer ee duulimaadyada. Ural Airlines, Azur air, Nordwind, Ikar, Red Wings, S7, iyo Yamal ayaa duulimaadyo ka bilaabi doona gobollada.
Si kastaba ha ahaatee, shirkadaha diyaaradaha ee Ruushka ayaa u baahan doona ugu yaraan toddobaad si ay duulimaadyo cusub ugu bilaabaan Masar. Gaadiidleydu waxay u baahan doonaan waqti si ay u bilaabaan iibinta una sameeyaan shabakad duulimaadyo.
“Shirkadaha diyaaradaha Ruushku ma furi doonaan duulimaadyo cusub Masar mustaqbalka dhow, kootada ayaa la qaybiyey shalay oo keliya - kuwa xambaara waxay u baahan doonaan ugu yaraan toddobaad si ay u bilaabaan iibinta una sameeyaan jadwal,” ayuu yiri sarkaalka wakaaladda.
Iyada oo ay weheliso soo jeedinta in la kordhiyo tirada duulimaadyada joogtada ah ee Masar, Wakaaladda Gaadiidka Cirka ee Federaalka ee Ruushka ayaa sidoo kale u doodaysa bilowga duulimaadyada kirada ah ee dalka.
"Hay'addu waxay la shaqeyneysaa mas'uuliyiinta fulinta federaalka ee xiisaha leh si ay ugu soo gudbiyaan soo jeedinno xarunta hawlgalka si loo kordhiyo tirada joogtada ah oo loo bilaabo duulimaadyada kirada ah ee magaalooyinka loo dalxiis tago ee Masar, labadaba Moscow iyo gobollada kale ee dalka," ayaa lagu yiri bayaanka hay'adda .